Phantse yonke intombazana iyazi malunga nendlela yokutshintsha indlela yakhe yokuvakalelwa ngayo, uzive, unokutshintsha nje inwele zakhe. Ngokukodwa kwimixholo ebalulekileyo njengezobubele beKrisimesi, uqala ukucinga ngoku. Kwaye kunjalo, kungcono ukucinga izinto, ukuza uphinde uhlaziye, ukuba kuyimfuneko, kunokuba uphikisane kwaye ufune izisombululo.
Akuyena wonke umntu owaziyo ukuba iifowuni ezenziwe iholide ngokwayo ziya kuthandwa kakhulu, zifake imfashini nangemva kokubhiyozela ngokwazo. Kubalulekile kuqala ukucacisa ubude bekhanda, ngokuqinisekileyo umbala, i-hairdo ekhethiweyo kakhulu, ukuqwalasela isambatho sonyaka omtsha, ubude kunye nesitayela. Kwaye kubaluleke kakhulu, kufuneka uqaphele uhlobo lokubonakala. Ngenxa yesiganeko esibalulekileyo njengoko ukhetha iinwele zonyaka omtsha, kufuneka uqwalasele yonke into, kwaneenkcukacha ezincinci. Umgaqo oyintloko kufuneka ube yinto yokuba i-hairstyle ekhethiweyo imele ifane nomfanekiso okhethiweyo kwaye ugxininise ubuhle bobunini bomnini wayo.
Iibraledi zemibala . Unyaka ozayo ozayo uya kuba yinto engavamile kakhulu, njengoko kulindeleke ukuba unyaka oMnyama weNyoka. Ngako oko, ukwakheka koNyaka omtsha kwaye, ngokufanelekileyo, izambatho kunye neenwele zeNtsha zikaNtsundu akufanele kube yinto engavamile. Kule nto, njengabanye abacwangcisi abacebisa, unokwenza uhlobise iintloko zakho kunye nemigqomo engavamile yee-shades ezahlukeneyo. Sifanele sithembele kuphela kwizinto ezikhethwa kuzo ngombala wazo. Ukuze udale izinwele ezifanelekileyo, unako ukunqamanisa iinwele ezibuxoki, iintambo zokufakelwa kwizinwele zakho, kunye nomthunzi ezinye zeenwele zakho nge tonic. Kuyafaneleka ukuphawula, ngokuphindaphindiweyo kunyaka ozayo kuya kuphinda kube nombala ogqithwayo. Ukufumana amantombazana anesibindi, abanini beenwele ezimnyama, unokululeka ukutsala imibala eminye imibala yemifashane ebudeni bonyaka obomvu. Kodwa unokwenza ukhetho lwakho ngokubhekiselele kwimigca ebomvu okanye imigodi.
Izinwele ezinde. Abanikazi beenwele ezimfutshane banokululeka ukutyekela kwindlela "yokwakhiwa" kwizinwele zabo zobuchule, eziza kubonisa isimo sakho esingavamile. Ukutshatyalaliswa okunyamezelayo inwele ezinjalo, ezikwazi ukufihla emva komsebenzi onzima wenkosi, uya kukwazi ukugxininisa ubufazi bomnini wayo. Kufuneka nje ukuba ubude nokulungiswa kweenwele kuwanele. Abathandwayo, ababukeli besitayela kunye nobuhle, amanqaku amaninzi abelulekisayo ukuba banake ingqalelo kwiimpawu ze-Retro kwi-70s. Emva kwakho konke, umfanekiso we-Hollywood diva wale maxesha amandulo kunye namaza athambileyo ezinwele zakhe zihlala ziba ngumzekelo wobuntombi kunye nokukhwabanisa. Amantombazana anenezinwele ezinde, kufuneka azi ukuba ngo-2012 oluzayo aluyi kulungelelaniswa neenwele eziqhelekileyo, esi sihloko asiyi kwamkeleka.
Amathandani abathandayo. Phantse nayiphi na i-bang ephathekayo inokuyihobisa nayiphi na inwele, kunye nokudala umfanekiso opheleleyo. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kunyaka owedlule, ukutsalwa kwe-bangs kwakuthandwayo. Ngoku kuya kulungeleka inwele, okanye ubude obude. Umgca ochanekileyo ubuya kunyaka ozayo, kodwa sele sele ude kwizinwele ezinde. Into eyona nto kukuba inokwakheka komgca kunye nemigangatho elinganayo. Emva koko unokufumana umfanekiso ocacileyo kunye onomdla.
Ukutshintsha kwe-Volumetric . Ngokukodwa, xa abakhangeli becebisa ukuba ukhethe zonke iintlobo zeenwele zeenwele ezinde, kungcono ukuba unike umthamo onokwenza imodeli kubanikazi beenwele ezide. Kwaye ukudala i-hairstyle enjalo kungcono ukhethe i-curlers ephakathi. Kananjalo ngokufanelekileyo ngolo hlobo lwezinwele zefestile lunokubonakala lubhetele kwizinwele eziza kuba nemibala enjalo, njenge-caramel kunye ne-chestnut shades. Ukufumana amanye amantombazana anesibindi, ejwayele ukuhlala ephuma kwisihlwele kwaye ube yindawo ebalulekileyo yokuqwalaselwa komntu wonke, unokwenza i-cascade ekhuselekileyo. Ngokunceda ungeke ube nemfashini ngexesha elizayo, kodwa udale imifanekiso eyahlukileyo.
Iingqungquthela ezibukhali . Kucacile ukuba ukubuyisela iinwele zakho emva kokutshintsha kwemichiza kuya kuba nzima kwaye kunzima. Kwimeko apho, ukuba ukwazi ukubhalisa kunye nenkosi elungileyo, kungcono ukhethe ukunqunyulwa kweenwele eziza kukunceda xa ukhetha iinwele zeNtsha. Ngenhlanhla umnikazi wendalo yee-curls ezimbi, kuba ngo-2012, ziya kuba zifanelekileyo. Ewe, ukuze uqedele umfanekiso ochanekileyo, kuyimfuneko ukhethe ukuhlobisa okufanelekileyo kunye nefowuni.
Ukuqhawula ngokungaqhelekanga. Musa ukucinga ukuba i-braids, i-plaits kunye nayo yonke into eyahlukileyo yokuluka ifanelekileyo, idume kuphela ngonyaka ophumayo, iya kuba yindalo kwixesha elizayo. Le nto inezizathu ezininzi. Emva kwakho konke, ngoncedo lwaluphi na olulula kwaye oluqhelekileyo, kodwa lukhuni olukhangekileyo, unokwenza ikhanda eliza kukhangeleka elitsha. Ukongeza, unokusebenzisa ubucwebe obuhlukahlukeneyo kunye nezixhobo ukugxininisa ububhinqa nokubukeka okumangalisayo.
Inwele ye-mermaid. Ingadalwa ngeenwele ezinde, kwaye ngaphantsi koko. Ukongezelela, akuyimfuneko ukuyichitha ixesha kunye nemali kwiinkonzo zengcali, xa unokwenza konke wena kwaye ungahambi kakubi. Emva koko, xa zonke izidlo ezilungiselelwe ziza kulinda iindwendwe zazo, unokukhawuleza uthathe isimboli. Ukwenza oku, kufuneka uhlukanise iinwele zakho ngokusebenzisa ukuhlukana phakathi, uze u-curl, uqale ukusuka phakathi kobude bawo. Ngokuqinisekileyo, iiphulaphu eziphumo kufuneka zihlulwe zibe ziincinci. Emva koko unike i-hairdo yonke ivolumu kwaye ulungise yonke le mveliso kunye ne-varnish.
Amancinci amancinci . Amantombazana aneenwele ezimfutshane kufuneka alandele ezinye iingcebiso zabapelli, isitayela seklasi, esondelene neentshukumo ezinokufashisa. Oku, oku, kusebenza kumbala weenwele zombini, kunye nokulungiswa, kunye nenani langempela. Kuba ixesha elitsha licaca ukuba kungcono ukudala ukunganyaniseki kwizinwele zakho. Kwaye iifowuni ezimfutshane, isitayela se-retro kufuneka sibe yinto eyamkelekileyo. Kodwa kuyimfuneko ukunamathela kumbala, ngokunokwenzeka kangangoko kunokwenzeka kumbala wendalo weenwele. Eyona nto iya kuba kunye neentambo kwi-style ye-60-yee-yee-60 zee-minyaka ezidlulileyo. I-haircut bob nayo ayiyi kuguquka kwi-vocation ye-haircuts e-fashionable ngo-2012. Isicatshulwa kakhulu, iya kukhangela kwizinwele ezikhanyayo.
Ukuze ube yinkosikazi yebhola, akudingekile ukuba uchithe umzamo omkhulu, ixesha, imali yokudala i-Hairdress ye-New Year's hairdress, okwaneleyo ukubandakanya ingcamango, usebenzisa i-curls, i-braids kunye nezinto ezinjalo kwi style of holiday. Emva koko uya kukwazi ukuqonda zonke iimpahla zakho zeNtsha eNtsha kunye nezobhenqo eziqhelekileyo ezingaqhelekanga.
Izibonakaliso zeZodiac kunye nomsebenzi
Indlela yokujonga omncinane emva kwe-40 ngoncedo lweengubo
Ukukhulelwa kunye nezilwanyana
I-ayisikrimu yaseNdiya enee-noodle zerayisi
Iingxaki zemfundo yobuntu bokudala
Ukulahleka kweenwele kwiintsana
Ukuphefumlelwa kweenyawo kubantwana: impendulo yabantu